Ukuzamazama komhlaba kwaseNepal kwabikezelwa ososayensi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
NgoMgqibelo odlule iNepal ishaqiswe ukuzamazama komhlaba okulinganiselwa ku-7 esikalini sikaRichter, eshiya ngemuva abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezine befile ezweni kanye nezisulu eziningi ezindaweni ezizungezile ezifana neNdiya noma iBangladesh. Kwase kuyiminyaka engama-81 into enjengale ingakaze ibonwe, ikakhulukazi kusukela ngo-1934 lapho ukuzamazama komhlaba kubulala abantu abayizinkulungwane eziyi-17 ababeseKathmandu, inhlokodolobha yaseNepal.
Kepha ukuzamazama komhlaba kwaseNepal, ngokusho kwezazi zokwakheka komhlaba, kuyingxenye »yomphumela we-domino» ebumba izwekazi.
Iplanethi ihlukaniswe ngamacwecwe e-tectonic, emaphethelweni ayo okuthiwa amaphutha. Eyaziwa kakhulu iSan Andrés Fault, etholakala entshonalanga yeNyakatho Melika, futhi eqhubeka ngokuhlukanisa leyo ndawo yeNyakatho Melika. Ngenxa yokuhamba kwalokhu, ukubuka okujwayelekile kokushintshwa kwamakhaya ethu, kuhamba kancane, kuhlukanisa amazwekazi noma kudala izintaba. Kepha lokhu kushaqeka kungaba yingozi kubantu abaphilayo, ngoba kubangela ukuzamazama komhlaba noma ama-tsunami, kuya ngokuthi amaphutha ashiwo atholakala kuphi.
Emakhulwini ayisikhombisa eminyaka edlule, epuletini laseNdiya naseMelika, kwaqubuka ukuzamazama okukhulu okubili. Ukuzamazama komhlaba eNepal kule mpelasonto kungaba yi umphumela wokucindezeleka okuqoqiwe ngephutha kusukela lapho. U-Laurent Bolinger, ovela kwi-French Commission for Alternative Energy and Atomic Energy, nethimba lakhe balindele emasontweni ambalwa edlule ukuthi kuzokwenzeka ukuzamazama komhlaba okunamandla kakhulu lapho kwenzeke khona.
Iqembu lososayensi likwazile ukuthola ukuthi kukhona ukundindizela kwangaphambilini ngokumba imisele ngephutha eliwela iNepal lisuka entshonalanga liye empumalanga. Kuze kube manje, bathole iminonjana yokundindizela komhlaba kusukela ngonyaka ka-1255, 1344 futhi muva nje kusukela ngo-1934. Ngenxa yamathuba wephethini, ososayensi bakhathazeka.
Kangangokuthi ngokusho kukaBollinger kungaba nokuzamazama komhlaba okushanjengoba lesi esenzeke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule besingenamandla anele okwephula umhlaba. Ngakho-ke, ukungezwani kungenzeka kwakha ngaphansi komhlaba futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukuzamazama komhlaba eNepal, okubikezelwe ososayensi